Pakistàna: Fifidianana sy Fanisàna · Global Voices teny Malagasy
Pakistàna: Fifidianana sy Fanisàna
Voadika ny 27 Marsa 2018 3:02 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, 繁體中文, 简体中文, English
Raha mivoaka hifidy ireo vahoaka ao Pakistàna androany (18/02/08), miresaka momba ny fifidianana kosa ny tontolon'ny bilaogy. Manaraka ny fifidianana ny All Things Pakistan, ary manainga ireo mpamaky azy mba hizara ny fitantarana avy any amin-dry zareo.
Liana manokana handre ireo tatitra avy amin'ny mpamaky anay ao Pakistàna izahay, momba izay hitany eny an'arabe, ny zavatra niainany mivantana momba ny fifidianana, ary ny reny avy amin'ny hafa eny an-kianja teny. Amin'ny tranga maro, ny fijoroana vavolombelona tahaka izany ataon'ireo nanatri-maso dia manandanja lavitra mihoatra noho izay ho hitantsika rehetra any anaty fahitalavitra.
Hazavain'ny Crow's Nest ny antony maha-zavatra tsy misy ilàna azy ny fifidianana, indrindra raha tsy misy ifandraisany loatra amin'ny dingana demaokratika izay ho vokatry ny fifidianana eo. Na tsy nisy hosoka aza ny fifidianana, ny dindon'ireo sasantsasany mpanao politika dia midika fa zara raha hisy toerana ho an'ny tena fanovàna.
Tsy hifidy aho satria fantatro fa efa voaomana mialoha ny ho vokatry ny fifidianana. Tena feno fitanilàna hatrany anatiny lalina any ny dingana nikarakaràna ny fifidianana mba handresen'ny mpanao jadona. Ananany daholo ny vintana rehetra handresena ahy. Tsy hanana vintana handresy velively raha izaho sy ny fomba firosoko manaraka idealy. Sady izao koa, mpiady mifanandrina amiko sy ny vahoakany ihany izy, izahay izay olontsotra bitika kely. Tsy hifidy ihany koa aho satria tsy misy kandidà mendrika ny hofidiana ao amin'ny fari-pifidianana misy ahy. Tsy hifidy aho satria tiako ny haneho fandavana ny didy iray feno famoretana nataon'ny fitondrana tompomenakely nifandimby teo amin'ny tanànako.
Etsy ankilany, ao amin'ny KO, toa maniry ny handeha hifidy ilay mpanoratra, saingy tsy afaka noho ny lisi-pifidianana tsizarizary sy ratsy tantana izay nanilika ireo mpifidy voasoratra anarana, ary ny tsy fanomezana toerana ny famahàna ny olana momba ireo anarana tsy tafiditra.
Nivoitra fa tena mbola ratsy dia ratsy noho izay nieritreretako azy ilay lisi-pifidianana – ny marina dia tena lasa ratsy be mihitsy izy ireny, na dia tsy nanantena zavatra betsaka loatra aza aho. Tsy azo ampiasaina tanteraka ny tranonkala natao ho an'ny fifidianana, ary betsaka ireo anarana tsy tafiditra nefa tao anatin'ny lisitra tany aloha. Ohatra, tsy ao ny anaran'ny ankohonako sy maro amin'ireo havako – izay mpifidy nisoratra anarana daholo ny ankamaroany.
Na tsy tao anaty lisitra aza ny anarany, nisafidy ny handeha hifidy ihany aho – nandany ora telo aho nandehanana tany amin'ireo biraom-pifidianana rehetra teny akaikin'ny faritra misy ahy, ary tsy voasoratra na dia tamin'ny iray tamin'izy ireny aza. Nifanena taminà olom-pantatro vitsivitsy aho, tsy ao anaty lisitra ny antsasa-manila tamin'izy ireo – araka izany dia niverina nody izahay ary vato very ny anay.
Shahab ao amin'ny Metroblogging Islamabad toa nientanentana ery momba ny nahafahany nifidy, ary milaza fa betsaka ireo olona niverin-dàlana nefa tokony hifidy, tamin'ny filazàna hoe mpisoloky daholo ireo mpanao politika. Manaraka akaiky ny vokatry ny fifidianana isam-paritra ny Parliament Watch. Mitondra fanavaozana tsy tapaka momba ny vokatry ny dingana arahana amin'ny fifidianana kosa ny The Pakistani Spectator.